၁၄ နှစ်အရွယ် မြေးမလေးပျောက်လို့ လိုက်ရှာတော့ တစ်​ရွာထည်းသား၏ ​အိမ်​ခြင်​​ထောင်​အတွင်း​တွေ့သောအခါ....
၁၄ နှစ်အရွယ် မြေးမလေးပျောက်သွားလို့ လိုက်ရှာတော့ တစ်​ရွာထည်းသား၏ ​နေအိမ်​ခြင်​​ထောင်​အတွင်း​တွေ့သောအခါ
အိမ်​က​ပျောက်​သွားတဲ့ ​မြေးမ​လေးကို လိုက်​ရှာ​တော့ တစ်​ရွာထည်းသား ၏ ​နေအိမ်​ခြင်​​ထောင်​ အတွင်းက​တွေ့လို့မိခင်​က ရဲတိုင်​။
၃.၇.၂၀၁၈ ည​နေ ၄ နာရီ အချိန်​ကပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး ​ပေါင်းတည်​မြို့နယ်မှတ်​တိုင်​နယ်​​မြေရဲစခန်း အ​ရှေ့​တောင်​ ဘက်​ ၇ မိုင်​ ၄ ဖာလုံခန့်​အကွာ ××××​ကျေးရွာ အုပ်​စု ×××××​ကျေးရွာ မှ မိခင်​ဖြစ်​သူ ​ဒေါ်××××× ၃၅ နှစ်​သည်​ ၎င်းရွာ​တောင်​ပိုင်း ကွမ်းခြံတွင်​ ရှိ​နေစဉ်​ ​ဒေါ်×××××၏ မိခင်​ဖြစ်​သူမှ ​ဒေါ်××××၆၈နှစ်​မှ ဖုံးဆက်​ပြီး ​မြေးဖြစ်​သူ မ××××၁၄ နှစ်​သည်​ ​နေအိမ်​မှ ထွက်​ခွာ သွား၍သမီးဖြစ်​သူ ​ဒေါ်××××ထံ ​ရောက်​​နေသလားဟု ​မေးမြန်းရာ ​ရောက်​လာခြင်းမရှိ​ကြောင်း ပြန်​လည်​​ဖြေကြားပြီး မိခင်​ဖြစ်​သူမှ ​နေအိမ်​သို့ ပြန်​လာသည်​ ဆို၏။
​နေအိမ်​တွင်​ သမီးဖြစ်​သူ မ××××အားမ​တွေ့ရှိသဖြင့်​ သမီးဖြစ်​သူ သွားလာတတ်​​သော မ×××× ၏ ​နေအိမ်​သို့ သွား​ရောက်​​မေးမြန်းရာ ခြံ​နောက်​ဘက်​သို့ ထွက်​သွား ​ကြောင်း ​ပြောပြသိရှိရသဖြင့်​လိုက်​လံရှာ​ဖွေရာ မင်း​အောင်​ (ခ)မင်း​ဇေယျာ​အောင်​မှာ ၎င်းခြံ​ရှေ့တွင်​ရပ်​​နေသည်​ကို ​တွေ့မြင်​ရသဖြင့်​ မသင်္ကာသဖြင့်​ ​နေအိမ်​အတွင်း ၀င်​​ရောက်​ရှာ​ဖွေရာ ​နေအိမ်​ ခြင်​​ထောင်​ အတွင်း သမီးဖြစ်​သူ ကို ထိုင်​လျှက်​​တွေ့ရှိရသဖြင့်​ ​နေအိမ်​သို့ ပြန်​လည်​​ခေါ်​ဆောင်​လာပြီး ​မေးမြန်းရာ…….
​နေအိမ်​မှ မိခင်​ရှိ​သော ကွမ်းခြံသို့ လိုက်​လာစဉ်​ မင်း​အောင်​ (ခ)မင်း​ဇေယျာ​အောင်​မှ ၎င်း၏ ခြံ​ရှေ့မှ လက်​ပြ၍ ​ခေါ်​ကြောင်း၎င်းမှ “မလာဘူးဟု “​ပြောစဉ်​ အနားသို့​ရောက်​ရှိလာကာ ပြန်​မ​ပြောနဲ့ ပြောရင်​သတ်​ပစ်​မည်​ဟု ဆိုကာ လက်​ကိုဆွဲ၍၎င်း၏ ​နေအိမ်​ ခြင်​​ထောင်​ ထဲသို့ ဆွဲခေါ်တွန်း​ပို့ပြီး အမည်​မသိ ​ဆေးနှစ်​လုံးသောက်​ခိုင်းသဖြင့်​ မ​သောက်​ဘဲလွှင့်​ပြစ်​ခဲ့​ကြောင်း ၎င်းမှ ခြင်​​ထောင်​ အတွင်း ၀င်​လာပြီး မ××××အား မဖွယ်​မရာ ပြုလုပ်​ခဲ့​ကြောင်း ​ပြောပြသိရှိရ၏။
ယင်းဖြစ်​စဉ်​အရ မင်း​အောင်​(ခ)မင်း​ဇေယျာ​အောင်​ ၃၆ နှစ်​ ×××××​ကျေးရွာ အုပ်​စု ​ပေါင်းတည်​မြို့နယ်​ ​နေသူအားဥပ​ဒေ အရ အ​ရေးယူ​ပေးပါရန်​ မိခင်​ဖြစ်​သူ ​ဒေါ်××××မှ တရားလိုပြုလုပ်​ပြီး ပေါင်းတည်​မြို့မ ရဲစခန်း သို့ တိုင်​ကြားရာရာဇသတ်​ကြီး ပုဒ်​မ ၃၇၆/၅၁၁/၅၀၆တို့ ဖြင့်​ အမှု့ဖွင့်​ ပြီး စစ်​​ဆေး​ဆောင်​ရွက်​လျှက်​ရှိ ​ကြောင်း ဂျာနယ်​မှာ ​ရေးသား​ဖော်​ပြ ထားပါတယ်​။
အိမျ​က​ပြောကျ​သှားတဲ့ ​မွေးမ​လေးကို လိုကျ​ရှာ​တော့ တဈ​ရှာထညျးသား ၏ ​နအေိမျ​ခွငျ​​ထောငျ​ အတှငျးက​တှလေို့မိခငျ​က ရဲတိုငျ​။
၃.၇.၂၀၁၈ ည​နေ ၄ နာရီ အခြိနျ​ကပဲခူးတိုငျး​ဒသေကွီး ​ပေါငျးတညျ​မွို့နယျမှတျ​တိုငျ​နယျ​​မွရေဲစခနျး အ​ရှေ့​တောငျ​ ဘကျ​ ၇ မိုငျ​ ၄ ဖာလုံခနျ့​အကှာ ××××​ကြေးရှာ အုပျ​စု ×××××​ကြေးရှာ မှ မိခငျ​ဖွဈ​သူ ​ဒျေါ××××× ၃၅ နှဈ​သညျ​ ၎င်းငျးရှာ​တောငျ​ပိုငျး ကှမျးခွံတှငျ​ ရှိ​နစေဉျ​ ​ဒျေါ×××××၏ မိခငျ​ဖွဈ​သူမှ ​ဒျေါ××××၆၈နှဈ​မှ ဖုံးဆကျ​ပွီး ​မွေးဖွဈ​သူ မ××××၁၄ နှဈ​သညျ​ ​နအေိမျ​မှ ထှကျ​ခှာ သှား၍သမီးဖွဈ​သူ ​ဒျေါ××××ထံ ​ရောကျ​​နသေလားဟု ​မေးမွနျးရာ ​ရောကျ​လာခွငျးမရှိ​ကွောငျး ပွနျ​လညျ​​ဖွကွေားပွီး မိခငျ​ဖွဈ​သူမှ ​နအေိမျ​သို့ ပွနျ​လာသညျ​ ဆို၏။
​နအေိမျ​တှငျ​ သမီးဖွဈ​သူ မ××××အားမ​တှရှေိ့သဖွငျ့​ သမီးဖွဈ​သူ သှားလာတတျ​​သော မ×××× ၏ ​နအေိမျ​သို့ သှား​ရောကျ​​မေးမွနျးရာ ခွံ​နောကျ​ဘကျ​သို့ ထှကျ​သှား ​ကွောငျး ​ပွောပွသိရှိရသဖွငျ့​လိုကျ​လံရှာ​ဖှရော မငျး​အောငျ​ (ခ)မငျး​ဇယြော​အောငျ​မှာ ၎င်းငျးခွံ​ရှတှေ့ငျ​ရပျ​​နသေညျ​ကို ​တှမွေ့ငျ​ရသဖွငျ့​ မသင်ျကာသဖွငျ့​ ​နအေိမျ​အတှငျး ဝငျ​​ရောကျ​ရှာ​ဖှရော ​နအေိမျ​ ခွငျ​​ထောငျ​ အတှငျး သမီးဖွဈ​သူ ကို ထိုငျ​လြှကျ​​တှရှေိ့ရသဖွငျ့​ ​နအေိမျ​သို့ ပွနျ​လညျ​​ချေါ​ဆောငျ​လာပွီး ​မေးမွနျးရာ…….
​နအေိမျ​မှ မိခငျ​ရှိ​သော ကှမျးခွံသို့ လိုကျ​လာစဉျ​ မငျး​အောငျ​ (ခ)မငျး​ဇယြော​အောငျ​မှ ၎င်းငျး၏ ခွံ​ရှမှေ့ လကျ​ပွ၍ ​ချေါ​ကွောငျး၎င်းငျးမှ “မလာဘူးဟု “​ပွောစဉျ​ အနားသို့​ရောကျ​ရှိလာကာ ပွနျ​မ​ပွောနဲ့ ပွောရငျ​သတျ​ပဈ​မညျ​ဟု ဆိုကာ လကျ​ကိုဆှဲ၍၎င်းငျး၏ ​နအေိမျ​ ခွငျ​​ထောငျ​ ထဲသို့ ဆှဲချေါတှနျး​ပို့ပွီး အမညျ​မသိ ​ဆေးနှဈ​လုံးသောကျ​ခိုငျးသဖွငျ့​ မ​သောကျ​ဘဲလှငျ့​ပွဈ​ခဲ့​ကွောငျး ၎င်းငျးမှ ခွငျ​​ထောငျ​ အတှငျး ဝငျ​လာပွီး မ××××အား မဖှယျ​မရာ ပွုလုပျ​ခဲ့​ကွောငျး ​ပွောပွသိရှိရ၏။
ယငျးဖွဈ​စဉျ​အရ မငျး​အောငျ​(ခ)မငျး​ဇယြော​အောငျ​ ၃၆ နှဈ​ ×××××​ကြေးရှာ အုပျ​စု ​ပေါငျးတညျ​မွို့နယျ​ ​နသေူအားဥပ​ဒေ အရ အ​ရေးယူ​ပေးပါရနျ​ မိခငျ​ဖွဈ​သူ ​ဒျေါ××××မှ တရားလိုပွုလုပျ​ပွီး ပေါငျးတညျ​မွို့မ ရဲစခနျး သို့ တိုငျ​ကွားရာရာဇသတျ​ကွီး ပုဒျ​မ ၃၇၆/၅၁၁/၅၀၆တို့ ဖွငျ့​ အမှု့ဖှငျ့​ ပွီး စဈ​​ဆေး​ဆောငျ​ရှကျ​လြှကျ​ရှိ ​ကွောငျး ဂြာနယျ​မှာ ​ရေးသား​ဖျော​ပွ ထားပါတယျ​။